galmudugnews.com » Galmudug
Daawo Video Ciidamada la wareegaya Jubaland
Daawo Wasiir Cukuse oo shalaayto ka jooga Video uu ka duubay dagaalkii Isaaq
Daawo Ugaas diid Prof Samatar oo booqday Ugaaska Samaroon
Daawo Ciyaartii Hargeysa oo ku dhamaatay rabshad iyo dagaal
Ila qosol: Daawo Faroole oo niikinaa iyo Kenya oo
Daawo Wada hadalkii Galmudug oo fashilmay
Daawo Muqdisho oo dib u dhisantay
Dhageyso Faroole ku dhaartay inuu aqbaleeyn Dowlad dhexe in Somalia ka hirgesho
Daawo biloowga israaca Hawiye
Daawo Siyaasi Daarooda oo Siilaanyo iyo Muuse Biixi weydiistay inay Siyaad Barre u duceeyaan
Daawo taageerayaasha Madaxweyne Garguurte oo cirka isku shareeray
Home » Author Archive Somalidu S/afrika sharci daro wey ku galaan sharci daro waa ku ganacsadaan sharci darana waa lagu dilaa?!! Views 16598Somalidu S/afrika sharci daro wey ku galaan sharci daro waa ku ganacsadaan sharci darana waa lagu dilaa?!!
Marka laga hadlayo ganacsi wuxuu leeyahay xeerar iyo qawaaniin cidii ka gudubtana ey cawaaqib xumo kala kulmeyso, ganacsigu wuxuu kala yahay mid internatiol ah iyo mid local ah kan localka ah xaga ii dhig balse midka internationalka ayaa xambaarsan culeys farabadan wuxuuna... Kmg idlaayee kiinyoy ogoow Views 16700Kmg idlaayee kiinyoy ogoow
Aduun waa shalay iyo maanta, majirto qof hal xaalad isaga nagaada waligiis wa malin ey kula jirto iyo maalin ey kaa jirto, dalkeena somalia wuxuu mudo kabadan 20 sano edeg ugu jiray qaar kamid ah wadamada igad wuxuu ka oomana doorkiisa diplomacy, kiisa maamul iyo go,aan ka gaarista aaayihiisa, quursi ku dul qadeyn badan oo lagu hayey xaalku manta wuxuu... Somalidu nabad waa rabtaa lakiin mid tolkiis keeney bey rabaan?!! Views 161285Somalidu nabad waa rabtaa lakiin mid tolkiis keeney bey rabaan?!!
Marka laga hadlayo bulshada somalida dhexdeeda qofkasta wuxuu jecel yahay nabad iyo in daganaasho lahelo,lakiin wuxuu rabaa in taas uu keeno nin tolkiisa ah,? Marka la eego gudaha iyo dibada dhamaan somalidu waxey wada sheegaan in ey doonayaan in nabad lahelo in dowlad lahelo shirarka ey ku qabtaan dibadaha waxey... Saxafiyow wada dhowr xornimada iyo masuuliyada Views 16201Saxafiyow wada dhowr xornimada iyo masuuliyada
Horey ayey somalidu u tiri ama afeef hore lahow ama adkeysime dambe lahow. Wixii qaldan in laga afeefto dhinacna la isaga tuuro koley waa muhiim hadii kale mar xeero iyo faldhaan kala dhaceen ayey noqondoontaa in la is eedo,,qormadeyda manta waxey ku wajahantahay inta magaca saxaafada bahdishay ee lawada ogyahay, ee kuma socoto saxaafada oo... Faalo: Boosaska Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Bayern Munich Iyo Barcelona Kulanka Caawa Ee Champions League. Views 16236Bayern Munich ayaa martigelin doonta Barcelona lugta hore ee semi-finalka Champions League caawa marka ay labada kooxood ku kulmaan Allainz Arena.
Kooxda Jarmalka oo dhawaan loo caleemo saraay horyaalka Bundesliga oo ay ku qaadeen rikoor waqti cusub ah ayaa rajeynaya inay gaaraan finalkoodii seddexaad ee muddo afar sanno ah ka dib markii koobkaan laga qaaday 2010 iyo 2012.
Kooxda Barcelona... Kalakaan askariyow horta yaa ku soo diray?!! Views 16406Kalakaan askariyow horta yaa ku soo diray?!!
ereyga kalakaan micnihiisu waa kala ceyn ama kala jaad hadba saad u taaqaan. Waxaana qormadeydani ku wajahantahay waxa yaabo yaab leh oo aan ku arkay muqdisho iyo meelo kaleba oo quseeya habdhaqanka askarta qaar mahan gabigood,
sida lawada ogsoonyahay, askari waa adeege qaran wa ilaalshe qaran, waa astaan dal jira, waxeyna ukala baxaan dhowr... Cesc Fabregas Oo Doonaya Finalka Champions League Inuu Noqdo El Clasico. Views 162003
Cesc Fabregas ayaa qirtay in finalka Champions League oo ay isku soo baxaan Real Madrid iyo Barcelona inay noqon laheyd ciyaarta ugu muhimsan taariikhda kubada cagta.
Real Madrid ayaa semi-finalka Champions League wajihi doonta Borussia Dortmund, halka Barcelona ay la ciyaari doonto Bayern Munich.
“Final Champions League oo Barca-Madrid ah waxa uu noqon lahaa kulanka ugu muhiimsan taariikhda... shaqalaha isbitalka marka oo mushaar la,aan ka cabanaya Views 161232
Shaqakaha ka hawul gala isbitaalka Magaalada Marka Ayaa Xligan waxa ay ka Cabanayan Mushaar la,an soo Wajahday xili Shaqalaha ka hawul gala isbitalkaasi Aysan wax Mushaaar ah Qadan mudo ku Dhaw 6 bilood
Shaqlahan oo kulan ku yeshy Magalada Marka aya waxa ay Shegen in Xiligan ay u baahan yihin in ay Helaan lacagihi Musharaka madama in mudo ah aysan Qadan Mushaar shaqalaha ka hawul... Shacabka Kenya oo saakay u dareeray goobaha cod bixinta ee doorashada madaxtinimada dalkaas Views 16226Shacabka reer Kenya ayaa saaka u dareeray goobaha cod bixinta ee doorashada madaxtinimada dalkaas, iyadoo dadka ay safaf dhaa dheer ugu jiraan inay cododkooda ka dhiibtaan, waxaana aad isha loogu hayaa doorashada guud ee maanta dhaceysa.
ilaa 14-milyan ayaa la diiwaan geliyay, kuwaasoo cododkooda dhiibanaya, sideed musharax ayaa isku haya tartanka musharaxnimada, waxaana ugu cad cad Ra’iisul... R/wasaare Saacid iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Dhuusomareeb Views 16233Ra/iisal Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Dhuusomareeb ee gobalka Galgaduud halkaasi oo ay kusoo dhaweeyeen masuuliyiin ka tirsan ahlusuna iyo qeybaha bulshada.
Wafdiga R/wasaaraha ayaa waxaa ka mid ah wasiiro ka tirsan xukuumada iyo xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaana wafdigan ku soo dhoweeyay garoonka dayuuradaha ee magaalada Dhuusomareeb... Cristiano Ronaldo: Waan Jeclaan Lahaa Inaan Gool Ku Dhaliyo Old Trafford Habeen Danbe. Views 16243Xiddiga kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa shaaca ka qaaday inuu jeclaan lahaa inuu gool ku dhaliyo Old Trafford berrito, kulanka lugta labaad ee wareega 16ka ee Champions League.
Ronaldo ayaa lix sanno ku qaatay Manchester United, waxaana markii ugu horeysay uu Old Trafford ku ciyaarayaa isagoo xiran maaliyad koox kale:
“Waxa ay noqon doontaa jawi aad u xamaasad badan. Hadii aan... Daawo Sawiro Qaraxii ka dhacay xeebta liido iyo qofkii is qarxiyay Fadlan Hadawan hadii adan xamili karin Views 16487Qaraxyo laba ah hasa yeeshee kala duwanaa sida loo fuliyay ayaa galabta waxaa lagu qaaday maqaayada Indian Ocean oo ku talla xeebta Liido degmada Cadbdi Casiis ee gobalka Banaadir.
Weerarada oo ilbiriqsiya uun ay u dhexeeyeen ayaa waxa ay kala ahaayeen mid uu fuliyay ruux naftii hura ah iyo mid kale oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo ladhigay Irida hore ee Maqaayada.
Sida... Barcelona oo Albaabada u Furtay Cidii Dooneysa Laacibkooda David Villa Views 16166Madaxweyne ku xigeenka Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa albaabada u furay cidii dooneysa laacibka Barcleona ee David villa.
David Vila oo aan xagaagan dib ugu soo laaban waayey qaab cayaareedkiisii lagu yaqiinay kadib markii uu sanadkii hore dhaawac aad u xun uu soo gaaray.
Arsenal ayaa ugu horeysa naadiga sida aadka ah u doonaya laacibka David Villa.
Bartomeu ayaa yiri”Tababaraha iyo... Steven El Sharaawy oo Qalinka ku Duugay Qandaraas Cusub Views 16224-Laacibka u dhashay wadanka Masar balse u cayaara qaranka Talyaaniga, Steven Elshaarawy, ayaa lagu so waramayaa inuu saxiixay qandaraas cusub.
Steven Elshaarawy oo ah laacib asal ahaan kasoo jeeda wadanka masar balse ku dhashay wadanka Talyaaniga magaalada xeebta xigta ee Savona ayaa kusoo biiray naadiga AC Milan sanadkii 2011 xiligaas ee uu laacibka yimid naadiga Padova ee uu amaah ugu... Avram Grant oo laga Yaabo inuu Bedelo Rafa Benitez Dhawaan Views 16161Tababaraha ku meel gaarka ah ee Chelsea Rafa Benitez ayaa la sheegayaa inuu isaga tagi doono naadiga kulanka wixii ka danbeya kulanka Sabtida ee oo aay la leeyihiin West Brom Albion.
Balse Chelsea ayaa laga yaabaa in aay Raf Benitez aay ku bedelaan Grant Avram inta ka dhiman xagaagan .
Warbixintaas ayaa waxaa qoray shabakadda warbaahinta ee kasoo baxda wadanka Ingiriiska ee lagu magacaabo... Axmed Madoobe oo sheegay inuu u sharaxan yahay Madaxweynaha Jubaland Views 16222
Gudoomiyaha Maamulka KMG ee Kismaayo Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa sheegay inuu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Maamulka Jubland, kadib markii shalay uu ka furmay magaalada Kismaayo shirweynaha maamul u sameynta Jubooyinka iyo Gedo.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in hadii xilkaas loo doorto uu wax badan ka qabanayo gobolada Jubooyinka iyo Gedo, isagoo soo... Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo si kulul uga soo horjeestay Shirka kafurmay Kismaayo Views 16246
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa si kulul uga soo hor jeestay shirweynaha Maamul u sameynta Jubooyinka ee shalay ka furmay magaalada Kismaayo, isagoo cadeeyay in shirka ka furmay Kismaayo uu wado qaldan ku socdo.
Wareysi uu siiyay laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ayuu Ra’iisul Wasaaruhu si cad u sheegay in shirka ka furmay Kismaayo ay ka maqan yihiin saddex... WAR DEG DEG: Labo qarax oo goor dhow ka dhacay Maqaaxi ka soo horjeeda Baarka Liido Views 16483
Labo qarax oo mid uu ahaa qof isa soo miidaamiyay iyo qarax gaari waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen ayaa goor dhow ka dhacay Maqaaxida Indian Ocean oo ka soo horjeeda Baarka Liido oo todobaad ka hor qarax lala eegtay.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxa, iyadoo lagu soo waramayo in qasaare uu jiro, hase ahaatee si dhab ah looma oga.
Gawaarida gurmadka deg dega ee Ambalaaska ayaa goobta... Next »
Latest news Daawo quruxdii Muqdisho oo dib u soo laabatay
Daawo Video taageerayaasha Madaxweyne Garguurte iyo Dowladda Federalka oo cirka isku shareeray
PROF SAMATAR: “FROM SOOMAALI TO SAMAROON”
Daawo Video Ciyaartii Hargeysa oo ku dhamaatay dagaal qabiil iyo rabshado baahsan
Daawo Siyaasi Daarooda oo Siilaanyo weydiistay inuu Siyaad Barre u duceeyo
Popular Bulshada Galmudug oo laashay heshiiskii GaroweSafarkii Gobolka Hobyo ee Wafdiga Gudoomiyaha Baarlamanka Ugar Gaar Gabadhaan Dhibaataysan oo Madaxa BIYO Oga furteen Topnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay.Buugga Farmaajo iyo Jeneral Caydiid Subscribe Subscribe via RSS feed Subscribe by Email Breaking News » Daawo quruxdii Muqdisho oo dib u soo laabatay Daawo Video taageerayaasha Madaxweyne Garguurte iyo Dowladda Federalka oo cirka isku shareeray PROF SAMATAR: “FROM SOOMAALI TO SAMAROON” Daawo Video Ciyaartii Hargeysa oo ku dhamaatay dagaal qabiil iyo rabshado baahsan Daawo Siyaasi Daarooda oo Siilaanyo weydiistay inuu Siyaad Barre u duceeyo Halkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray Daawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye Dhageyso Madaxweyne Faroole” Waligey ma aqbalayo in Dowlada Dhexe Somalia ka dhalato” Somalidu S/afrika sharci daro wey ku galaan sharci daro waa ku ganacsadaan sharci darana waa lagu dilaa?!! Daawo Ugaasdiidkii Samatar oo booqday Ugaas Abdirashiid Ugaas Rooble Tweet
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21143 hitsContact US - 19986 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19674 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16376 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16190 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14882 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14342 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14310 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14006 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13786 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12881 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12674 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12647 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12353 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12070 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11964 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11683 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11615 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11592 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11580 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11468 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11331 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11256 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11248 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11059 hits Home About